Chii chinonzi modhi 130 | Ehupfumi Zvemari
Chii chinonzi Model 130
Encarni Arcoya | 10/06/2021 08:04 | General hupfumi
Kunobva Chii chinonzi modhi 130: Famisenper
Paunoita chiitiko chehupfumi, imwe yemaitiro aunofanirwa kuita kubhadharisa chikwereti nekuda kwemutero wemunhu wega. Izvi zvinoitwa kuburikidza nemuenzaniso 130. Asi, Chii chinonzi modhi 130?
Kana iwe uchangobva kunyoresa, kana kana iwe uchida kuziva kuti fomu 130 chii uye kuti ungarizadza sei nemazvo, saka tichaenda kukuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezve maitiro aya uye, pamusoro pezvose, maitiro aunga tevedzera Treasurement. saka hapana chirango.
1 Chii chinonzi Model 130
2 Maitiro ekuizadza
2.1 Nhanho nhanho mumuenzaniso
Kwayaka: agency tax
Model 130 inokomberedza chii chinonzi "Quarterly mari yemutero inodzosera vanhu". Mubhadharo unoitwa muzvikamu (unobhadharwa mwedzi mitatu yega yega) yechikamu chebhadharo chinofanirwa kuitwa kubva pamutero wemunhu unobhadharwa kuHomwe.
Ehe saizvozvo, havasi vanhu vese vanosungirwa kudaro, chete izvo zvinosanganisirwa mune inotevera kesi:
Kuti vanoita zviitiko zvehupfumi, zvinosanganisira izvo zvekurima, zvipfuyo, masango kana hove. Ehezve, ivo vanofanirwa kumisikidza yakananga fungidziro nzira, ingave yakajairwa kana yakareruka.
Kuti vanoita mabasa ehunyanzvi. Kunze kwekuti kana 70% yemari yako yatove neyakavanzika kana kuisa paakaundi. Kana zvirizvo, havafanirwe kuzadza Fomu 130.
Kana ivo vari vehukama kudyidzana uye / kana nharaunda dzepfuma. Mune ino kesi, mumwe nemumwe mudiwa anofanira kuita iyo muripo zvichienderana nekutora kwavo kutora chikamu.
Zvino zvave kujekeserwa kwauri kuti fomu 130 ndeipi, inguva yekuziva maitirwo aungaita kuti ive yakanaka kuHumanimari uye isingakwezve kutarisisa kwako; kana zvakatoipisisa, vanokupa chibvumirano.
Iwe unofanirwa kuziva kuti, Muchikamu cheDeclarant, unofanirwa kuzadza zvese iyo NIF uye zita uye zita. Zvino, munzvimbo yekuunganidza, zvakakosha kuti utaure gore remari rairi kureva uye nekota yenguva.
Kana uchizivisa mambure ekudzoka, iwe unofanirwa kuziva kuti inoungana. Ndokunge, fungidzira kuti kota yekutanga iwe waita 100 maeuro mubatsiro. Muchikamu chechipiri, une mazana maviri emaeuro. Nekudaro, kana uchizadza fomu 200, unofanirwa kuwedzera mari yawakazivisa mukota yekutanga neiyo yechipiri. Mune mamwe mazwi, mune ino yekupedzisira kota haizove mazana maviri emauro, asi maeuro mazana matatu (130 + 200 mukota yekutanga).
Izvozvowo zvinoitika nemubhadharo mumashure, iwe unofanirwa kuwedzera izvo zveese makota, kuwedzera mari yawave nayo mune irikuenderera.
Muzhinji, modhi 130 ine zvikamu zvitatu zvakasiyana.
Chikamu I uko kunoiswa mari nezvinodiwa uye zvobva zvasimbiswa kuti imarii makumi maviri kubva muzana ekubvisa mari kubva pamubhadharo. Mushure mezvo, izvo zvinyoroveso zvaungave iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchishandiswa uye iwe waizowana mhedzisiro
Chikamu II, yakanangana nevaya vanoita zvekurima, masango, hove kana zvipfuyo chiitiko, vanozofanira kuzadza modhi muchikamu chino.
Y chikamu III, inova pfupiso yezvose zvataurwa pamusoro apa iyo inotipa iyo yekupedzisira nhamba, iyo inogona kuve yekubhadhara kana kubhadhara.
Nhanho nhanho mumuenzaniso
Kwayaka: Mutero Rubatsiro
Kuti zvijekese, chengeta zvinotevera mupfungwa:
Bhokisi 1: ipapo iwe unofanirwa kuisa mari yegore.
Bhokisi 2: isa izvo zvinoshandiswa pagore.
Bhokisi 3: izvi zvinongoerekana zvaitika, zvazvinoita kubvisa mari nemari.
Bhokisi 4: inokukumbira iwe kuverenga manhamba kuti yakawanda sei 20% yemhedzisiro yebhokisi 3, chero ichi mhedzisiro yave yakanaka. Chii chisina kunaka? Isa zero.
Bhokisi rechishanu: munzvimbo ino uchave uine huwandu hwemabhokisi maviri, 5 uye 7. Aya ndiwo huwandu hwemamodeli zana nemakumi matatu awakapa pamberi. Kana, semuenzaniso, iri rekutanga regore, haufanire kuisa chero chinhu pano. Asi hongu kubva kune yechipiri trimester. Ndosaka zvakakosha kuti uve nemagwaro ari pamusoro apa.
Mubhokisi rechitanhatu: uchave uine huwandu hwezvakabatiswa zvawaisa kana zvawakaisa kwauri.
Bhokisi rechinomwe: ndechimwe kubvisa, kubva mubhokisi 7 ne5 pabhokisi 6. Nemamwe mazwi. Izvo zvaunofanirwa kubhadhara (bhokisi rechina) zvichabviswa kubva pane izvo zvinorehwa (4 na4) izvo zvinotofungidzirwa kuti zvakapinda muzita rako.
Kusvikira apa zvingave zvevanhu vanozvishandira kana vanhu vane zviitiko zvehupfumi. Zvino, kana iwe uchishanda mune zvekurima, zvipfuyo, hove kana masango, iwe unofanirwa kuzadza zvinotevera:
Bhokisi 8: iwe unofanirwa kuisa mari mukati megore rose, kusanganisira zvipo, rubatsiro ...
Bhokisi 9: 2% yehuwandu hwebhokisi rapfuura richashandiswa pasina kufunga nezve mari.
Bhokisi 10: yaishandiswa kuisa zvimisikidzo zvawaifanirwa kunyorera pane ma invoice awakagadzira.
Bhokisi 11: Ndiro rinobvisa mabhokisi 9 ne10, richipa mhedzisiro inogona kuve yakaipa kana yakanaka.
Pakupedzisira, Chikamu chechitatu ipfupiso, uye mabhokisi anoenderana ndeaya:
Bhokisi 12: kwaunoisa huwandu hwemabhokisi 7 ne 11. Zvekare, inogona kuve yakanaka kana isina kunaka kukosha.
Bhokisi 13: chimwe chinhu chisingazivikanwe nevakawanda ndechekuti, kana mari yako iri shoma, iyo Treasure inokutendera iwe kudzikiswa kusvika pamazana euros. Chinhu chakanakisa ndechekuti iwe utsvage ruzivo nezve iro chairo bhokisi kuti uzive kukosha kwaunogona kunyorera kudzikisira (kana uchikwanisa).
Mubhokisi 14: pachave nemusiyano uripo pakati pemabhokisi e12 ne13 Zvakare anogona kuve akanaka kana asina kunaka.
Bhokisi 15: inoshandiswa kunyora zvisizvo zvisina kunaka. Ndokunge, kana iwe wakave nemhedzisiro yakaipa mubhokisi 19, unofanirwa kuzviratidza, mukuwedzera, iwe unofanirwa kufunga kuti kukosha kwebhokisi iri hakugone kupfuura iro regumi nemana.
Bhokisi 16: kana bhokisi regumi nemana rave rakanaka kwauri uye iwe uchibhadharawo chikwereti chekutenga kana kugadzirisa imba yako, unogona kubvisa izvo zvinoshandiswa pano. Marii yaunobvisa? Huye, huwandu huri mubhokisi 14 (kana 3 kana uine zvekurima, zviitiko zvezvipfuyo ...). Kuti kana, muganho wakaiswa pa8 euros.
Bhokisi 17: zviri nyore, mhedzisiro yekubvisa mabhokisi 14 ne15.
Bhokisi 18: uchafanira kungoizadza mukati kana paine kuenderana kwekuzivisa. Zvikasadaro, inoramba iri zero kana isina chinhu.
Bhokisi 19: pakupedzisira, bhokisi iri rinotora chikamu chegumi neshanu negumi neshanu, richipa mhedzisiro iri yemhando 17. Kana iri yakanaka, uchafanira kubhadhara; uye kana zvisina kunaka, unogona kubhadhara nemhando dzinotevera dzegore (unogona zvakare kuti vadzose zvawakabhadhara zvakanyanya).
Nenzira iyi, iwe unogona kuve negwara uye unzwisise zvirinani kuti chii modhi 130 uye kuti ungaizadza sei nemazvo kuti zvese zvive zvechokwadi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Chii chinonzi Model 130
Kukura kwehupfumi: chii icho, chinokonzeresa, kuti chinoyerwa sei
Ndeapi marudzi einishuwarenzi yemotokari aripo?